Bogga Ciyaaraha, 01 May 2019
Arbaco 1 May 2019
Bayern Munich oo Akadeemiyad ka fureysa Africa
Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka oo ka mid ah kooxaha ugu magaca weyn qaaradda Yurub, ayaa la saxiixatay xiriirka kubadda cagta dalka Itoobiya, heshiis u ogolaanaya in ay magaalada Addis Ababa ay ka furato akadeemiyaddeedi ugu horreysay ee ay ka hirgeliso qaaradda Africa.
Paris St Germain oo hanatay horyaalka France
Kooxda Paris St Germain ayaa shalay ku guuleysatay horyaalka kubadda cagta dalkaasi, kaddib marki ay 3-1 ku garaacday kooxda Monaco ciyaar ka dhacday garoonka PSG ee Parc des Princes ee magaalada Paris.
Liverpool iyo City oo isu jawaabaya
Liverpool ayaa Axadi shalay dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka kaddib marki ay xalay 2-0 ku soo garaacday kooxda Cardiff oo ay marti u aheyd. Labada gool waxaa u kala dhaliyay Liverpool, Georginio Wijnaldum iyo James Milner.
Benzema oo u badiyay Real Madrid
Dhanka Spain, haddii aanu aadno, kooxda Real Madrid ayaa dhuuqsatay kaalinta saddexaad, kaddib marki ay xalay 3-0 ku garaacday kooxda Athletic Bilbao. Saddexda goolba waxaa wada dhaliyay Karim Benzema.
Juventus oo raadineysa Joao Felix
Warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa maanta ku warramay, in kooxda Juventus ay dooneyso weeraryahanka dhalinyarada ah ee u soo baxay kooxda Benfica iyo xulka Portual, ciyaaryahan Joao Felix.
Salah oo u badiyay Liverpool
Gool caaqibo lahaa oo uu xalay Mohamed Salah ayaa ka caawiyay kooxdiisa Liverpool in ay dib ugu soo laabtaan hogaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League, ka gadaal marki ay 2-0 ku dubteen Chelsea.
Guuldarro culus oo ku habsatay PSG
Kooxda Paris St Germain ayaa la kulantay xalay guuldarro culus, kaddib marki ay 5-1 kula jabtay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Lille.
Atalanta oo kusoo dhawaaneysa Yurub
Kooxda Atalanta ee dalka Talyaaniga ayaa hal dhibic oo kaliya usoo jirsatay kaalinta afraad ee horyaalka oo ay hadda ku jirto Milan, kaddib marki ay xalay 4-1 ku garaacday Bologna.
Solskjaer oo la dallacsiiyay
Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in macallinki kumeel gaarka ahaa Ole Gunnar Solskjaer ay ka dhigtay tababaraha joogtada ah ee kooxda, kaddib marki uu saxiixay Khamiista maanta ah heshiis saddex sano ah.
Pato uu ku biiray Sao Paulo
Weeraryahanki hore ee kooxda AC Milan Alexandre Pato ayaa Arbacadi shalay ku biiray looxda Sao Paulo ee dalka Brazil, kaddib marki uu kasoo tagay kooxda Tianjin Tianhai ee dalka Shiinaha.
Zidane oo dib ugu laabtay Real Madrid
Zinedine Zidane ayaa dib ugu laabtay maamulka naadiga Real Madrid, kadib markii uu ka tagay naadigaasi 10 bil ka hor.
Liverpool oo qabatay hogaanka
Kooxda Liverpool ayaa kali ku noqotay qeybta ugu sarreysa horyaalka Ingiriiska ee Premier League kaddib mari ay barbarro 0-0 ah iskula agdhaceen kooxda ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee Manchester United.